Amabinzana enkuthazo abafundi Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Esikolweni, kwisikolo samabanga aphakamileyo, eyunivesithi ... Ngephepha-mvume lokuqhuba, nesidanga semasters, nesiqinisekiso sesiNgesi ... Iimviwo ziyinxalenye yobomi bethu ukusukela mhla sazalwa de saphantse safa. Ixesha elingaphezulu ude uqhele zonke izithethe ezibandakanya iimviwo, kodwa uloyiko, imithambo-luvo kunye noxinzelelo azipheli. Banokwahluka kubunzulu, kodwa bahlala bekhona ukuze basilinganise kwaye ngamanye amaxesha basenze silahlekelwe yinkohliso yokuphumelela uviwo. Asinakukuxelela imibuzo yoviwo lwakho olulandelayo, kodwa sineepilisi ezincinci eziza kukunika amandla ongezelelweyo: amabinzana ashukumisayo ukukhuthaza ukuba ufunde kwaye uphumelele uviwo.
1 Amabinzana enkuthazo abafundi
2 Amabinzana enkuthazo abafundi bezikolo zamabanga aphantsi
3 Amabinzana enkuthazo abafundi beekholeji
4 Amabinzana enkuthazo abafundi bezikolo eziphakamileyo
5 Iividiyo zamabinzana akhuthazayo abafundi
Ndifunda ngelixa abanye belele. Ndifumana le ndiyifunayo, ngelixa abanye beyifuna.
Impumelelo sisixa semizamo encinci ephindaphindwe imihla ngemihla
Ukuba usebenza nzima, izinto ezintle kunye neziphumo ezilungileyo ziya kungena ebomini bakho
Ulahlekile wafunyanwa ulula? Khumbula ukuba yonke imihla inokuba sisiqalo sento entle. Sukuncama!
Kuphela ukuba unokuba nesibindi sokusilela okukhulu, uya kuthi ekugqibeleni uphumelele.
Ngaba uyayibona into engaphaya koko kuza kwenzeka? Bubomi bakho obutsha ngaphandle kweemviwo! Kuphelile, i-sprint yokugqibela. Ziphose kuyo!
Kulula ukuncama, kodwa ungayenzi. Kuya kufuneka uqhubeke ulwa ukuze ukonwabele impumelelo yakho.
Inkuthazo yipetroli yengqondo
Ukufundisisa sesona senzo sikhulu semvukelo kwinkqubo. Ulwazi lwaphula imixokelelwane yobukhoboka
Guqula "Andikwazi" ukuba "ndenze" kwaye uyakuba nayo yonke into oyifunayo.
Amabinzana enkuthazo abafundi bezikolo zamabanga aphantsi
Emva kweeyure ezimbini zokufunda, andikwazi ukuzibamba kodwa ndibala inani lamaphepha endishiyekileyo.
Inxalenye elula endiyenzileyo, inzima endiyenzayo ... nenxalenye engenakwenzeka, ndiza kuyithatha, kodwa ndiza kuyenza!
Ngomzamo kunye nomonde unokufikelela usukelo lwakho
Nika usuku ngalunye ithuba lokuba ube ngowona uphambili ebomini bakho
Musa ukuthi awunaxesha laneleyo. Unenani elifanayo leeyure njengoTeresa waseCalcutta, uAlbert Einstein, uLeonardo Da Vinci, uThomas Jefferson okanye uMichelangelo.
Impumelelo iza xa amaphupha akho emakhulu kunezizathu zakho
Yijonge ngokwahlukileyo namhlanje, lusuku lwakho!
Izinto ezintle ziyenzeka kwabo bazilindeleyo. Okona kulungileyo, kwabo bayisebenzelayo.
Amabinzana enkuthazo abafundi beekholeji
Ungaze ube likhoboka kwixesha lakho elidlulileyo, kodwa uyile ikamva lakho.
Sukuthi "andikwazi" nokuba kukuqhula. Ukungazi nto akunangqondo, kuya kukuthatha ngokungathí sina kwaye kukukhumbule lonke ixesha uzama
Kule minyaka idlulileyo, uyabukhumbula ubomi bakho kwaye uyazi ukuba uthathe esona sigqibo sihle: isifundo
Ngaphandle kokuba uyakholelwa kwisiqu sakho, akukho mntu uya kukwenzela sona.
Akukho mntu waziyo ukuba banokufumana ntoni de bazame
Ubeka imida, kuya kuthini ukuba siyazichitha?
Ngaphambi kokuthatha ukutsiba, lungiselela i-springboard
Impumelelo ikumzamo wakho hayi kwinto abanye abayicingayo ngawe.
Ungaze uthathele ingqalelo ukufundisisa njengembophelelo, kodwa njengethuba lokungena kwilizwe elimangalisayo nelilihle lolwazi
Ufunda ukuthetha ngokuthetha. Ukufunda, ukufunda. Ukusebenza, ukusebenza. Ukuthanda, ukuthanda.
Phila ngokungathi uza kufa ngomso. Funda ngokungathi uza kuphila ngonaphakade
Ukufunda bubutyebi obuya kulandela umniniyo kuyo yonke indawo
Ubomi bufana nokukhwela ibhayisekile. Ukuba ufuna ukugcina ibhalansi yakho, kuya kufuneka uqhubeke
Amabinzana enkuthazo abafundi bezikolo eziphakamileyo
Intliziyo yomntu ayijongwa ngokoko anako, kodwa ngokwento anikelayo.
Into ebalulekileyo ayisiyiyo into ethenjisiweyo, kodwa yinto ehanjisiweyo.
Alikho iyeza elilunge ngaphezu kokuba neengcinga ezonwabileyo.
Ungaphupha, uyile, uyile kwaye wakhe eyona ndawo intle kwihlabathi ... kodwa kuthatha abantu ukwenza konke oku kwenzeke.
Ukuba ithuba alinkqonkqozi, yakha umnyango.
Akukho nto ifundisa ngaphezu kokungalunganga.
Izinto ezintle ziza kwabo bakwaziyo ukulinda.
Into engenakwenzeka kuphela yinto engazanywayo.
Impumelelo sisixa semizamo encinci, ephindaphindwa imihla ngemihla.
Ukuba isicwangciso asisebenzi, tshintsha isicwangciso, kodwa ungatshintshi injongo.
Ungaze unikezele, kuba ngekhe wazi ukuba ukuzama okulandelayo kuya kuba kuko okusebenzayo.
Ekuphela komlo ophulukana nawo yile uyincamayo.
Ukuba uyadinwa, funda ukuphumla, unganikezeli.
Ubomi bufana nepuzzle. Isiqwenga ngasinye sinendawo kwaye kutheni. Sukunyanzelisa ukubeka iziqwenga apho zingalinganiyo.
Yonke into oyifunayo ukuze wonwabe ikwelinye icala lokoyika.
Ulonwabo aluxhomekekanga kwinto onayo, kodwa ekusebenziseni onika kuko konke onako.
Impumelelo enkulu kunazo zonke kukuzamkela.
Konke kufanelekile ukuba kukwenza uncume.
Kholelwa ukuba ungayenza kwaye uyakuyenza.
Ixesha lihamba ngokukhawuleza kwaye akufuneki ulichithe, funda ngoku nangomso uyakuba ngumntu ophumeleleyo kwaye owonwabileyo.
Iividiyo zamabinzana akhuthazayo abafundi